bhimphoto: क्यामेरा ट्रयापमा मिल्के
रामायणका पात्र रामचन्द्र, सीता र लक्ष्मण । १४ वर्षको वनवास । दरवारबाट केही कुकुर साथै लागेर गए । कुकुर हराए । राम-लक्ष्मणले सकेजति खोजी गरे । भेटिएनन् । अन्ततः रामले वरदान दिए - 'तिमीहरु आफैं बाँच्न सक्ने होउ । मान्छेबाहेक भेटेका सबै खाउ । जहाँ रहेपनि आफै आफ्नै पौरखमा बाँच ।' ताप्लेजुङको फुरुम्बुका देवी विष्ट (७०) ले यस्तो किवदन्ती भनिरहँदा कुकुर खोजेर फिरेका तन्नेरी अम्बिकाप्रसाद खतिवडा (२९) छक्क परे । लाग्यो, खोजी गरेको विषय पौराणिक कथासँग जोडिएको पनि रहेछ ।
फिरेर आएपछि उनलाई खान मन लागेको थिएन । कमजोरी महसुस भएको थियो । धूपध्वाँर अनि झारफुक गरिरहेका विष्ट यतिकै कहाँ थामिन्थे । 'त्यो मिल्केले आपतै खेलाको हो नि,' उनले भने 'धन्य बाँचियो । मार्थ्यो होला ।' गोठ गएका बेला बन कुकुरको समूहले उनको एउटा बाख्रो मार्‍यो । झट्ट देखे । कसेर झटारो हाने । छाउरोलाई लाग्यो । चिर्पटको तोडले छाउरोको इहलीला सकियो । कुकुर रिसाए । उनलाई घेरे । बाख्राको बथानमा चारपाउँ टेकेर घुस्रिएपछि आवाज लगाए 'गुहार गुहार कुकुरले मार्न लागे । गुहार ।' अरु गोठाला आइपुगेपछि कुकुरको समूह त्यहाँबाट भागे । थोरै कुप्रा कायाका कालाकाला विष्ट चाउरी मुहारले बोले, 'त्यो बेला बाँचेकै हो नि । म तन्नेरी थिएँ त्यो बेला । त्यसपछि कहिल्यै जम्काभेट भएन ।'
सातो बोलाउन फुङलिङस्थित खतिवडाको घर आएका विष्टका किवदन्तीका लेखोट कतै भेटिन्नन् । विराटनगरको गायत्री संस्कृत विद्यालयका शिक्षक पं कृष्णप्रसाद गुरागाइ भन्छन् 'वाल्मिकीको रामायणमा त्यसरी रामसँगै वनवासमा कुकुर पनि गएको भन्ने प्रसंग कतै छैन ।' पौराणिक कथाहरुमा मान्छेसँगै घरपालुवा र जंगली जनावरका प्रसंग जोडिएर नआउने भने होइनन् । 'हामीकहाँ नेपाल-भारतमा पढिने रामायण धेरै भाषामा अनुवादित छन् । १ सय २१ भाषामा छन्,' उनी भन्छन् 'चीन, कम्बोडिया र इण्डोनियशियामा पढिने रामायणमा हाम्राभन्दा केही प्रसंग फरक पनि छन् ।' हालसम्मको अध्ययनमा हेक्का भएसम्म वनवासमा कुकुर साथै लागेर गए भन्ने कतै उल्लेख नभएको दावी गुरागाइको छ ।
किवदन्तीका लागि विश्वसनीय आधार हुनु जरुरी छैन । तर, अम्बिकाको खोजी ताप्लेजुङका विभिन्न गाउमा स्थानीयले 'वनकुकुर, ठाडाकाने, मिल्के' र अंग्रेजीमा 'ढोले' वा 'एशिएटिक वाइल्ड डग' भनिने जनावरको हो । मेचीअञ्चलको उत्तरवर्ती पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको नाङखोल्याङका जन्मिएका यी तन्नेरी अध्ययन सिध्याउन आफ्नै घरमास्तिर आँखाले नभ्याउने विकट पाखा र जंगलभित्र आइपुगे । पोखरास्थित वनविज्ञान अध्ययन संस्थानमा स्नातकोत्तरको अन्तिम वर्ष शोधका लागि उनले यो विषय छनोट गरेका हुन् ।
'बल्ल बल्ल घर आइपुगेको छोरो जंगल पो जान्छु भन्छ, मत आत्तिए नि,' आमा सुशीला (५४) भन्छिन्, 'दिनै मान्छे अपहरण, लुटपाट अनि मारे भनेर रेडियो फलाकीरहन्थ्यो अनि डर लाग्दैन त !' अम्बिकाले आमालाई आफ्नो खोजी बारे सुरुमा खुलस्त बताएका थिएनन् । तीन वर्षअघि घर आउदा उनले बाघको अध्ययनमा आफ्नो रूचि रहेको बताएका थिए । 'साउनको महिना पानी परेको परेकै छ, जताततै पहिरो जान्छ, खोलानाला बढेका हुन्छन्,' उनी थप्छिन्, 'आफ्नो सन्तानले कष्ट ब्योहोरेर केही गरोस् जस्तो कसलाई लाग्छ ? मलाई उ जाने कुरा ठीक लागेको थिएन ।'
खतिवडाका पिता पेशाले शिक्षक हुन् । नाङखोल्याङकै प्राविमा २३ वर्ष पढाएपछि अवकाश लिएका देवीनारायण भन्छन्, 'उसको करका अघि हाम्रो के चल्छ । करिअरको कुरा हो ।' मातापितालाई बलले राजी पारेपछि मात्र घरमा अम्बिकाको यात्राका लागि तयारी सुरु भयो । मकै भुटेर जाँतोमा पिधी सातु बनाइयो । पहिल्यै बयममा राखेका कागतीको अचार, गुन्द्रुक, सातु घरबाट तयारी भएपछि बजारबाट ३० किलो चामल, केही प्याकेट विस्कुट र चाउचाउ पनि पोकोमा हालियो । यात्राका लागि अम्बिकाले जीपीएस, एउटा अटोफोकस क्यामेरा र १६ वटा क्यामेरा ट्रयाप (स्वचालित क्यामेरा) केही दिनअघि व्यवस्था गरेका थिए । क्यामेरा ट्रयाप उनलाई अध्ययनमा सघाउन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणको कोषको पहलमा चितवनको सौराहास्थित जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले उपलब्ध गराएको थियो । दुइ भरियालाई अघि लगाएपछि उनको यात्रा सुकेटार, देउराली, फावाखोलाहुँदै सिकैचाको काडेभञ्ज्याङ पुग्यो । साउन २६ को विहान ८ बजेको यात्रा त्यहाँ बटुवा वास बस्न बस्तीमा पुग्दा साँझको ७ बजेको थियो ।
गन्तव्य याम्फुदिन ताकेर हिडेको टोलीमा अम्बिका, उनीसँगै वातावरण विषयका साथी राजेश झा, तापेथोक गाविसबाट भरिया आएका रेशम लिम्बू र अर्का एक छन् । दोस्रो दिन विहानको यात्रा तेर्सो, उकालो लाग्दै तेल्लोक, पेदाङ, फुम्फेडाडाहुँदै मामाङ्खेको लक्ष्मी माविनजिक पुग्यो । १७९७ मिटर उचाइमा अवस्थित मामांखे हिउँदमा हिउँ झेल्ने सानो गाउँ हो । 'चिसो स्याठ चलेको थियो, सिमसिम पानी पर्न थालेको थियो,' अम्बिका भन्छन्, 'दोस्रो दिन थियो । धेरै गलेको र भोक लागेको महसुस भएको थियो ।'
भरियाले तोङ्बा खादै प्यास मेटाए । दुइ विद्यार्थीका लागि हरिया मकै पोलेर खाने व्यवस्था भयो । तेस्रो दिन ६ घण्टाको यात्रापछि टोलीले याम्फुदीन-८ टेक्यो । त्यहाँका कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रका नर्सरी नाइके तार्सदीप गुरुङ भेटिए । पहिल्यै खबर गरेकाले मिल्केसँग सम्बन्धित सुत्र त्यहीँ फेला पर्‍यो । त्यहाँ भेटिएका गुरुङ हिउचितुवा संरक्षण समितिका सदस्य भएकाले वन्यजन्तु सम्बन्धित घटना टिपोटमा उनी अभ्यस्त थिए । समितिले चलाएको पशुधन बीमा कार्यक्रमले उक्त क्षेत्रमा हिउँचितुवाले घरपालुवा मारे वा क्षति पुर्‍याए घटनाको प्रकृति हेरेर क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । समितिमा त्यसै साता स्थानीय टासी लामाले आफ्नो माउ गाइ र चौरीको बाछो वन्यजन्तुले मार्‍यो भन्दै क्षतिपूर्ति माग्दै निवेदन हालेका थिए ।
'टासीको गाइ र चौरीको बाछो मिल्केले मारेको रहेछ,' गुरुङले सुनाए, 'टासीले पाइला देखेको रैछ, अनि उसको निवेदन आको हो ।' गुरुङको भनाइलाई स्थानीय कञ्चनजंघा माविका प्रअ कुमार माबोले समर्थन जनाए । उनले भने 'यो क्षेत्रमा हिउँचितुवाभन्दा वनकुकुरले नै मारेको घटना छन् ।' सुत्र भेटेपछि टोलीले गाउँलेसँग छलफल र जानकारी बटुल्दै त्यो दिन बितायो । राजेश त्यही बसेर जलवायु परिवर्तनको अध्ययन गर्ने भए ।
त्यहाँबाट दुवै भरिया फुङलिङ फर्किए । हिमाली स्याठको माथिल्लो यात्रामा टोलीका सदस्य फेरिए । अब अम्बिकालाई साथ दिन तार्सदीप,टासी लामा, लाक्पा सेर्पा र नयाँ दुइ भरिया थिए । त्यहाबाट ४५ मिनेट मास्तिरको भोटेगाउमा दुइ दिन टोली थामियो । अघिल्लो यात्रा एक दिनको हिडाइपछि याङ्मुङखर्क पुग्यो । त्यहाँको अर्को बिहानदेखि अम्बिकाले ब्याग फुकाए । क्यामेरा ट्रयाप झिके । अनि एक/दुइ किलोमिटरको दूरिमा ठाउँठाउँ क्यामेरा ट्रयाप राखियो । 'हामीले वनकुकुर हिड्ने बाटो पहिल्याएका थियौ,' अम्बिका भन्छन्, 'अनि मात्र क्यामेरा फिट गर्दै अघि बढियो ।' पानी थामिएन । छाताले छेलिदै भिज्दै अघि बढ्दा अबको यात्रामा उनलाई साथ दिन टासी र लाक्पामात्र थिए ।
गोठ खोजेर वास बस्दै मिल्केको मलमुत्र पहिल्याउदै हिडेको विद्यार्थीलाई हिमाली गाउँका लाक्पा र टासीले बेला-बेला आश्चर्य पनि जनाए । 'किन के खोजेको हो यस्तो !,' टासीले भने, 'जंगल-जंगल खोजेर पनि यस्तो पढाइ हुन्छ ?' अम्बिकाले बुझनेसम्म बताए । वनकुकुरको खोजी नेपालका लागि नौलो हो । यो जन्तु मान्छे नजिक आउँदैन । घरपालुवाभन्दा बढि चलाख र जंगलमा वासस्थान फेरि फेरि विचरण गर्छ । विश्वमा यसको संख्या २ हजार ५ सय भन्दा कम्ती छ । विश्व संरक्षण संघ (आइयूसीएन) ले यसलाई दुर्लभको सूचीमा राखेको छ ।
हिमाली गाउँका सोझा बासिन्दाका मगजले धेरै पहिल्याउने कुरा थिएन । बाह्रैमास चिसो भइरहने । पानी र हिउँ पर्ने अनि गोठको बास बस्दै चौरी, भेडा, गाइ-बाख्रा बाल्दै तिनीहरुबाटै आर्थिक उपार्जन गर्दै आएकालाई जन्तु सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मात्र हेक्का छ ।
टोलीले सामेवा देउरालीदेखि नयाँझोडेनी डाँडासम्म क्यामेरा ट्रयाप राख्दै गएपछि फर्कने तय हुँदा यात्राको बाटो कहालीलाग्दो थियो । अम्बिका सुनाउँछन्, 'ल्हासेको पहिरो खतरा थियो । हामी फिर्दा रात परेको थियो । अगाडि बढ्ने बाटो पहिल्याउन गाह्रो भयो ।' बाटाका क्यामेरा जडानको काम सकिएर वनकुकुरले गरेका दिसा पहिल्याएर हेलखर्कहुँदै पेमादीनसम्म पुगियो । फर्कने बाटो दोस्रो थियो । राधाफोक, चैराम, सैसर , अन्धाफेदी, तोरनदीनहुदै ल्हासे पुगेर गोठको बास भयो । 'खाना बोकेपनि पानीमा भिजियो, लडियो, विरामी परियो,' उनले भने, 'धेरै हिडेपछिमात्र गोठ भेटियो । थकान धेरै भयो ।'
गोठमा अम्बिका र लाक्पाको अवस्था उस्तै थियो । गोठका दिलकुमारले खाना बनाए । खाने व्यवस्था गरे । त्यो दिन गोठ बाहिर निस्केर अघि बढ्ने साहस जुटेन । यात्राको २० दिन बितिसकेको थियो । अम्बिका सम्झन्छन्, 'त्यहाँबाट फिरेर क्यामेरा ट्रयाप खोल्ने काम गर्दै हिडियो ।' सबैमा २/२ जीबीका कार्ड थिए । झिक्दै आफ्नो क्यामेरामा हालेर रिभ्यु हेर्दै जादा चरा र चौरी धेरै क्याप्चर गरेका थिए । अन्ततः १२ नम्बर क्यामेरा ट्रयापले वनकुकुर खिचेको पाएपछि उनले लामो सास फेरे । यो ठाउँ ३७५२ मिटर उचाइको सामेवा देउराली थियो । जहाँ भूइँको आडमा दोबाटोमा कीला ठोकेर राखिएको क्यामेरा १८ दिन बसेको थियो । जसमा १ सय २४ एमबीमात्र मेमोरी स्पेस खर्च भएको थियो । क्याप्चर भएकामा तीन वटामा मात्र वनकुकुर थियो । दिनको १ः५९ बजेदेखि ५ मिनेटभित्र ।
'एउटाले मात्र वनकुकुर भेटेछ,' अम्बिका भन्छन् 'आँखाले प्रत्यक्ष देख्न नपाएपनि फोटो स्पष्ट थियो । काम चल्यो ।' उनका अनुसार क्यामेराले तीनवटाको संख्यामा रहेकालाई खिचेको छ । यी तिनै क्यामेरा ट्रयाप हुन् जसलाई समयसमयमा बाघ गणनाका लागि पनि उपयोग गरिन्छ । उनलाई आफ्नो विषयभन्दा पृथक खिचाइमा आएका वन्यजन्तुलाई प्राथमिकता दिनु थिएन । तर, पदचाप थाहा पाएपछि आफैं खिच्ने स्वचालित क्यामेराले धेरै प्रजातिका चरा, याक र मलसाप्रो पनि खिचेको छ । अहिले शोधको अन्तिम तयारीमा रहेका उनलाई लाग्छ संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि वन्यजीवन भेटिन्छन् । तिनको अध्ययन र संरक्षण गरिनुपर्छ ।
पंछी संरक्षण संघ प्रमुख डा. हुमबहादुर गुरुङको भनाइ पनि यस्तै छ । भन्छन्, 'संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएका एरियाबाहिर भेटिने पंछी र जन्तु राष्ट्रिय वन अनि सामुदायिक वनका एरियामा छन् ।' घाँस-दाउराका लागि जोगाउनेहरुले वनको संरक्षण गर्दा वन्यजन्तुलाई पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । तर, यिनलाई जोगाउन सामुदायिक वनकर्मीबीच विशेष खालका योजना चाहिने उनलाई लाग्छ । वन्यजीवन र पर्यावरणका विविधतालाई अध्ययनको विषय बनाउनेहरुबाट राष्ट्र र सम्बन्धित समुदायले जानकारीको लाभ पाउने अत्यधिक सम्भावना उपयोग हुन नसकेको अवस्था उनले देखेका छन् । गुरूङ भन्छन् 'जहाँ जुन कुराको अध्ययन गरिन्छ, त्यसको महत्व स्थानीयले थाहा पाए भनेमात्र हाम्रो प्राकृतिक संतुलन बनिरहन मद्दत मिल्छ ।'
(६ कात्तिक ०६७ मा कान्तिपुर कोसेलीमा प्रकाशित)
बनकुकुरका बारेमा अझ बढी जान्न मन लागे तलका यी लिंकमा जान सकिन्छ
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 4:48 PM